Home News Markii ugu horreysay muddo 27 sano ah oo Madaxweyne ku ammaano golahiisa...
Markii ugu horreysay muddo 27 sano ah oo Madaxweyne ku ammaano golahiisa wasiirada waxqabad la’aan
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa bogaadiyay waxqabadka xukuumdda Ra’isalwasaare Xasan Cali Kheyre, xilli uu amnigii magaalada Muqdisho uu faraha kasii baxayo. Shacabka Soomaaliyeed aya sugayay in Madaxweynaha uu la xisaabtamo golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad soona bandhigo qorsho cusub oo lagu sugi karo amniga Muqdisho, balse Farmaajo aya kala dul dhacay golaha wasiirada ammaan kuna bogaadiyay waxqabad aanu shacabka arkin.
Waxaa inta badan shacabka iyo siyaasiyiinta ay is lahaayeen wuxuu madaxweynaha ka hadli doonaa dhacdadii ciidama amniga ay kula kaceen qaar ka mid ah xildhibaanada BJFS, balse cid soo hadal qaaday iyo cid is weydiisay ma jirto. Tan aya waxay caddeyn u tahay in Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre ay iyaga ka danbeeyaan caburinta xildhibaanada iyo shacabka diidan dowladda fadhiidka ah.
Madaxweynaha oo shir guddoomiyay Kulanka Golaha Wasiirrada ayaa lagu soo bandhigay qorshihii aas aaska u ahaa ololohii doorashada Madaxweynaha ee ay Xukuumadda ku fashilantay, balse waa markii ugu horreeysay muddo 27 sano oo Madaxweyne ku ammaano golahiisa wasiirada waxqabad la’aan iyo fashil.
Ra’isalwasaare iyo mas’uuliyiin loo xil saaray in ay jeediyaan waxqabadka ayaa shirka ka sheegay in si wanaagsan loo maareeyay afar qodob oo kala ah; siyaasadda loo dhanyahay, amaanka, dhaqaalaha, iyo horumarinta Bulshada, oo intaba uu ku fashilmay RW Kheyre iyo golahiisa wasiirada.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo dhawaan raali galin buuxda ka bixineysa lacagtii laga qabtay iyo qaabkii loola dhaqmay Dow. Imaraadka Carabta
Next articleMadaxweyne Farmaajo: Fadlan jooji ku xadgudubka joogtada ah ee walaalaha Jabuuti iyo fudeydka siyaasadda aanad fahmin waxa ka jira mandaqadda
Miya Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur laga Qaaday Xayiraadi La Sheegay In ay...
Hay,adda Nabad Suggida oo soo bandhigtay nin shabaab ah oo weerar...